बाहिर प्रहरिको घेरा, भित्र नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डेको गोप्य भेला! « Post Khabar
बाहिर प्रहरिको घेरा, भित्र नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डेको गोप्य भेला!
Published on: 22 November, 2020 6:48 pm
कास्की ७ मंसिर : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पाण्डेले आइतबार पोखरामा नेपाल र प्रचण्ड पक्षीय भेला राख्नुभएको छ ।
पार्टी फुटने सन्देश लिएर हिजो चितवनमा जानुभएका पाण्डे आज पोखरा पुग्नु भएको हो । पोखराको माउन्ट कैलास होटलमा उक्त भेला भएको थियो
शनिबार चितवनको राप्ती नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भएका उनलाई त्यहाँ उपस्थित पार्टीकै कार्यकर्ताले सरकार ढल्न हुँदैन । पार्टी फुट्नु हुँदैन । पार्टी एकता जिन्दावाद भन्दै नारावाजी गरेका थिए । सोही घटना पोखरामा पनि दोहोरिन सक्ने आशंका भएपछि कडा सुरक्षाकासाथ भेला आयोजना गरिएको छ । भेलास्थलसम्म पुग्न भित्रैबाट नाम र आदेश आउनु पर्ने भेलामा सहभागीले बताउनु भयो ।
यसको सुचना बाहिर आएपछी यसको सामाजिक सन्जालमा बिरोध भएको छ ।
अनेरास्ववियूका नेता किशोर सुबेदी लेख्नुहुन्छ ‘ पोखराको माउन्ट कैलासमा सुरेन्द्र पाण्डेको गुट भेला। प्रहरी द्वारा एकजना माथी दुव्र्यवहार । भित्र गएका केहिलाई गुट नमिल्ने भन्दै निस्कासन । केपी ओलि माथी आरोप लगाउनेले सुरेन्द्र पाण्डे लाई कार्वाही गर्छन् कि नाइँ ?
प्रकाश पौडेलले लेख्नुहुन्छ ‘पार्टी का नेता सुरेन्द्र पान्डे ले पोखरा लेकसाइड को माउन्ट कैलास रिसोर्ट गुटको गोप्य भेला गर्नुभएको रैछ बाटो हिडदा थाहा पाइयो सडकमा सादा पोसाक का प्रहरी परिचालन भएका छन गुटको भेलामा यस्तो गम्भीर सुरक्षा देखेर म तीन छक पर्याछु ।
पोख्रेलि त कुलै हुन्छन चितवन झै न होस
यो बिचमा यस्ता खालका गुटको भेला पुर्ण बन्द हुन ‘